Ungayikhetha Kanjani iFirm Right Development App Firm | Martech Zone
Eminyakeni eyishumi edlule, wonke umuntu wayefuna ukuba nekona lakhe elincane le-Intanethi ngewebhusayithi eyenziwe ngezifiso. Indlela abasebenzisi abaxhumana ngayo ne-Intanethi ishintshela kumadivayisi eselula, futhi uhlelo lokusebenza luyindlela ebaluleke kakhulu yezimakethe eziningi eziqondile zokubandakanya abasebenzisi babo, ukukhulisa imali, nokwenza ngcono ukugcinwa kwamakhasimende.
A Umbiko weKinvey ngokususelwa kunhlolovo yama-CIO kanye nabaHoli Bamaselula kutholakale ukuthi ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lweselula kuyinto kubiza, kuhamba kancane futhi kuyakhathaza. U-56% wabaholi abangomahamba nendlwana okuxoxwe nabo bathi kuthatha izinyanga eziyi-7 kuye ngaphezu konyaka owodwa ukwakha uhlelo lokusebenza olulodwa. Abangu-18% bathi basebenzisa kusuka ku- $ 500,000 kuya ku- $ 1,000,000 ngohlelo lokusebenza ngalunye, ngesilinganiso esingu- $ 270,000 ngohlelo lokusebenza ngalunye
Ifemu yentuthuko elungile ingenza noma yephule impumelelo yohlelo lokusebenza, elenza ukukhetha okulungile kube yingxenye ebucayi yenqubo. Akudingeki ukuthi ube unjiniyela wesoftware ukuze wenze izinqumo ezifundile ukuthi iyiphi inkampani yentuthuko efanele iphrojekthi yakho. Nayi eminye imikhuba emihle okufanele uyicabangele lapho uhlangana nabangaba abahlinzeki.
Ingabe Ukuqina Kwakho Kungakukhulula Okudingayo?
Inkampani enamandla, enolwazi inephothifoliyo enhle. Okungcono nakakhulu - banephothifoliyo enezinto ezihlobene nombono wakho wohlelo lokusebenza. Iphothifoliyo enhle ongayibukeza inikeziwe, kepha uzothola umuzwa onamandla ngamazinga wedizayini yenkampani uma ukwazi ukubuka izinto ezifana nalezi ozifunayo. Isibonelo, ake sithi ufuna uhlelo lokusebenza oluthola izicathulo ezinhle kakhulu zabesifazane bebhizinisi. Ifemu kufanele ikwazi ukubonisa ezinye izinhlelo zokusebenza ezihlobene nokuthenga noma i-ecommerce - amaphuzu ebhonasi okuba nolwazi ngokuthenga izicathulo.
Ungakhohlwa ukuthi nabo badinga ukufaka amakhodi emodi yengxenyekazi ofuna ukuyisebenzisa ukwethula uhlelo lwakho lokusebenza. Ukuqala okuningi kuqala ngokwethula uhlelo lokusebenza kungxenyekazi eyodwa bese kunwetshelwa kokulandelayo uma sebazi ukuthi uhlelo lokusebenza luphumelele esitolo sohlelo lokusebenza. Thatha umdlalo odumile Clash of Clans kusuka kuSupercell okhiqize ngaphezulu kuka- $ 2.3 billion eminyakeni eyi-6 nje. Umdlalo okokuqala kwethulwe i-Apple iOS bese inwetshelwa ku-Android uma umdlalo ube yimpumelelo esobala. Le nqubo inciphise inani losekelo kanye naphezulu okudingekayo ukuqalisa umdlalo, ukuze onjiniyela bezinhlelo zokusebenza nabadali bakwazi ukugxila ekuthuthukisweni kwabasebenzisi bayo kuneziphazamisi zobuchwepheshe nokulungiswa kuzingxenyekazi eziningi.
Ukuqala okuningi kunecebo elifanayo lomdlalo, futhi inkampani yakho yokuthuthuka kufanele ibe nokuhlangenwe nakho okuqinile kupulatifomu ekhonjiwe. Amafemu ezentuthuko ajwayele ukuba namaqembu anokuhlangenwe nakho kwe-iOS ne-Android, kepha qinisekisa ukuthi iqembu lakho lingongoti kungxenyekazi yakho eqondiwe.
Ukusebenzisana Nezokuxhumana Izindlela Zokuphumelela
Njengomdali wohlelo lokusebenza, uyingxenye ebalulekile kuyo yonke inqubo yokuthuthukisa uhlelo lokusebenza. Abanye abadali bohlelo lokusebenza bacabanga ukuthi bangahambisa umbono wabo kunkampani yentuthuko, bathole izibuyekezo masonto onke bese bakhohlwa okunye. Eqinisweni, umdali kufanele asebenzisane ngokuseduze nefemu efanele ukuqinisekisa ukuthi umbono ucaciswe kahle kubathuthukisi.
Sicabanga ngathi njengabalingani bamakhasimende ethu, esibaqondisa ngokusebenzisa isipiliyoni sokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lweselula. Lokhu kusho ukuthi asisona isitolo sokusetha-futhi-ukhohlwe, noma; amaklayenti ethu kumele azinikele ekubambeni iqhaza kuzimpikiswano zokusebenza, ukukala izinqumo, nokuningi. Siboleka ubuchwepheshe bethu, kunjalo, kepha iklayenti liyabandakanyeka kuzo zonke izinyathelo zendlela. Kuyinqubo yokubambisana yangempela yawo wonke umuntu othintekayo. UKeith Shields, i-CEO, Designli
Yonke inkampani inendlela yayo yokwenza iphrojekthi yohlelo lokusebenza, kepha okuhle kakhulu kuhlala phansi nomdali, kubasize badlulisele umbono wabo ephepheni, futhi babhale kahle imininingwane ngaphambi kokufakwa kwamakhodi. Ngoba iqembu lokuthuthukisa lisha sha kulo mbono, lesi sinyathelo sibucayi impela futhi sidinga ukubambisana okuhle phakathi kwamaqembu womabili.
Abathuthukisi bakho bazodinga isikhathi sokuklama nokubhala ikhodi iphrojekthi, kepha iqembu kufanele libe nomphathi wephrojekthi ozokwazi ukukhuluma uma unemibuzo.
Cabanga ngokuqina kwentuthuko yakho njenge umlingani nengxenye yethimba eletha umbono wohlelo lwakho lokusebenza empilweni.
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi kungaphezu kwe-Graphics ne-Layout
Sekuyiminyaka, i-interface yohlelo lokusebenza ifakwe ngaphakathi ngomuzwa womsebenzisi. Lezi zombili zisetshenziswe ngokungafani, kepha isidingo sokuzihlukanisa zibe yizici ezihlukile zedizayini futhi zakha inkambu entsha yokufunda. Abadali bezinhlelo zokusebenza abasha bavame ukudideka isipiliyoni somsebenzisi nesixhumi esibonakalayo somsebenzisi Isibonisi somsebenzisi yizinkinobho, ukwakheka nokuklama okusebenzisana nomsebenzisi wakho. Okuhlangenwe nakho komsebenzisi kulula ukusetshenziswa nokuxhumana okunembile okunikezwa yilezi zinto.
Isibonelo, ungahle ube nenkinobho ehambisa imininingwane. Inkinobho iyingxenye yesixhumi esibonakalayo somsebenzisi. Ngabe umsebenzisi uqonda ngokuphelele ukuthi le nkinobho isetshenziselwa ukuhambisa imininingwane futhi ingatholakala kalula ekhasini? Le yingxenye yesipiliyoni somsebenzisi. Okuhlangenwe nakho komsebenzisi kubaluleke kakhulu ekubandakanyeni komsebenzisi, okuqhuba ukufakwa nokugcinwa komsebenzisi.
Inkampani yakho yentuthuko kufanele igxile ngokusobala ku-UI (isikhombimsebenzisi somsebenzisi) kanye ne-UX (isipiliyoni somsebenzisi). Kufanele babe nokuqonda okucacile kwedizayini enembile esiza abasebenzisi ukuzulazula kangcono kuhlelo lokusebenza.
Cishe ubuza ukuthi uzoyazi kanjani into enjalo? Njengoba unephothifoliyo yenkampani, ungathola ukuthi basebenza kanjani ne-UX ngokulanda izinhlelo zabo zokusebenza mhlawumbe kungxenyekazi ofuna ukuyikhomba. I-Android ne-iOS zinama-nuances wokuqamba okucashile, futhi la ma-nuances ayaqondwa abasebenzisi abathandekayo. Landa uhlelo lokusebenza, sebenzisa izici zalo, futhi uhlole ukuthi ngabe ukwakheka kunembile futhi kwenza kube lula ukuzulazula.
Kwenzekani Ngesikhathi Sokuthunyelwa?
Kunamafemu azonikeza ikhodi yomthombo bese ayishiye kukhasimende ukuthi lithole okusele, kepha lokhu kusebenza kuphela uma umdali wohlelo lokusebenza enethimba langaphakathi lonjiniyela noma enolwazi oluthile lohlelo lokusebenza. Inketho engcono yinkampani ekuhambisa ngenqubo kusuka kumadokhumenti wohlelo lokusebenza nokuklanywa kokuthumela uhlelo lokusebenza. Ukushiya ikhasimende ukuthi libhekane nokusatshalaliswa kukodwa akuqedi ngokugcwele iphrojekthi, futhi abathuthukisi kufanele babe lapho ukuze baqondise ikhasimende ngenqubo.
Uzoba nomhlangano wokugcina lapho kwethulwa khona umkhiqizo ophelile. Uma usayinile, sekuyisikhathi sokuhambisa uhlelo lokusebenza kusuka endaweni yentuthuko ukuyise ekukhiqizweni. Udinga ama-akhawunti wonjiniyela ezitolo ezinkulu zohlelo lokusebenza, kepha inkampani enhle isiza ukwenza lula ukuhamba.
Isitolo ngasinye sohlelo lokusebenza sinezidingo zaso, futhi inkampani efanele yokuthuthuka iyazazi lezi zidingo ngaphakathi nangaphandle. Bangasiza umdali ukuthi alungiselele ukulayishwa njengokulungisa izithombe zokumaketha, ukuhlanganisa noma yikuphi analytics ikhodi, nokulayisha ikhodi yomthombo endaweni efanele.
Ungahle udinge ukuxoxisana futhi uhlangane namafemu wokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza ngaphambi kokuthola okulungile. Kufanele uzizwe ukhululekile ngokuqina okukhethayo futhi uzizwe uqiniseka ukuthi bangakwazi ukuphatha iphrojekthi yakho ngobuchwepheshe nangokuzinikela.
Ukwenza lokhu ngokubuza imibuzo eminingi - eminingi oyidingayo ngohlelo lwakho lokusebenza nezinqubo abazisebenzisayo ukwenza iphrojekthi yenziwe. Ungabheka nokubuyekezwa uma kukhona. Ungaya endaweni yangakini noma uthole i-inthanethi eqinile, noma yikuphi okuthandayo uma nje umsebenzi uphathwa kahle futhi ushicilelwa ngezinkinga ezincane zamakhasimende ngangokunokwenzeka.
Tags: umthuthukisi wohlelo lokusebenza lweselulaukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lweselula
Kuyini Okungashadile, Okuqinisekisiwe, Nokukhetha Ukungena Kabili?